14 दिन पहिले
काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य अस्पतालहरूमा कोरोनाका बिरामी उपचारका लागि व्यवस्था गरिएकाआइसियु र शयया भरिएका छन्। शयया भरिएपछि अस्पतालहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वयमा अन्यत्र रेफर गर्नुपरेको जनाएका छन्। कोरोना बिरामीको उपचारका लागि व्यवस्था गरिएका शयया भरिभराउ भएपछि अन्यत्र रेफर गर्नुपरेको पाटन अस्पताल कोभिड १९ उपचार संयोजक डा। विमल पाण्डेले बताए। पाटन अस्पतालमा कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि १ सय ९० वटा सामान्य र २१ वटा आइसियु शयया छुट्याइएको छ। ‘तीन दिनदेखि सबै शयया प्याक
कोरोना उपचारमा सरकारको आत्मसमर्पणः ‘सरकारले जिम्मेवारी लिनुको साटो त्रास फैलायो’
काठमाडौं, बैशाख १९ । काठमाडौं उपत्यकामा कोभिड–१९ को उपचार गरिरहेका निजी तथा सरकारीसहितका अस्पतालहरूले बेड भरिएको विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यस्तो बेलामा सरकारले भने सिकिस्त बिरामीका लागि पनि शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै हात उठाएको छ । यसमा सर्वसाधारण तथा जनस्वास्थ्यविद्हरूले समेत आक्रोश र आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । शुक्रवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले […]
Reporters Nepal5दिन पहिले
सरकारलाई डा. महेश मास्केको सुझाव : मेडिकल कलेज र निजी अस्पताललाई ‘कोभिड अस्पताल’ मा रुपान्तरण गरौँ
Ratopati5दिन पहिले
लकडाउन अघि जाम देखि लामसम्म
काठमाडौं, १५ वैशाख । भोलिबाट काठमाडौंं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख शहरहरुमा लकडाउन हुँदैछ । लकडाउन अघि काठमाडौं उपत्यका छाड्नेहरु देखिएका छन् । उपत्यका बाहिर जाने बस भरिभराउ देखिएका छन् । उपत्यकाका मुख्य सडकहरुमा हिजो निकै जाम थियो । कोटेश्वर, ग्वार्को, सातदोबाटो, चावहिल, महाराजगञ्ज, कलंकीलगायतका चोकहरुमा राति ९ बजेसम्म जाम थियो । खाद्यान्न पसलहरुमा पनि मानिसहरुको भीड […]
Reporters Nepal9दिन पहिले
दोहोरिदै लकडाउनको दृश्य...
नेपालमा पहिलोपटक लकडाउन लागू हुँदा काठमाडौँबाट मानिसहरु हस्याङ–फस्याङ गर्दै आफ्नो पुर्ख्यौली घर फर्किएका थिए । एक वर्ष नबित्दै फेरि त्यस्तै कारुणिक दृश्य दोहोरिएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको चपेटामा परेसँगै देशका विभिन्न ठाउँमा विस्तारै लकडाउन गरिन थालिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू हुँदैछ । प्रशासनले काठमाडौँबासीलाई घर फर्किन दुई दिनको समय दिएको छ । त्यसैलाई सदुपयोग गर्दै यतिबेला मानिसहरु धमाधम घर फर्किन थालेका छन् । नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा राति पनि घर फ
निषेधाज्ञाले मात्र पुग्दैन, नागरिक आफैं सचेत हुनुपर्छ
१३ वैशाख, काठमाडौं । उपत्यकामा निषेधाज्ञाको निर्णय हुनु एक दिन अगाडि कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले महामारीको ‘चेन ब्रेक’ गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसका लागि लकडाउन अथवा बढी संक्रमण देखिएको क्षेत्रमा निषेधाज्ञाको विकल्प नरहेको सीसीएमसीको निचोड थियो । निषेधाज्ञाले मात्रै चेन ब्रेक गर्न सक्छ त ? जनस्वास्थ्यविद्हरूका अनुसार ‘मोबिलिटी’ बन्द गरेर मात्र […]
अनलाइनखबर9दिन पहिले
लकडाउन अघि उपत्यका छाड्न दुई दिन मौका
काठमाडौं, १३ वैशाख । कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि सरकारले लकडाउनको तयारी गरेको छ । आज काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठक बसेर केही क्षेत्र बन्द गराउने प्रस्ताव गरेको खुलेको हो । उनीहरुले लकडाउन समेतको सुझाव दिएर केही दिन घर फर्कने समय दिनुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला […]
Reporters Nepal 10 दिन पहिले
काठमान्डाैं / काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य अस्पतालहरूमा कोरोनाका बिरामी उपचारका लागि व्यवस्था गरिएकाआइसियु र शयया भरिएका छन्। शयया भरिएपछि अस्पतालहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वयमा अन्यत्र रेफर गर्नुपरेको जनाएका छन्। कोरोना बिरामीको उपचारका लागि व्यवस्था गरिएका शयया भरिभराउ भएपछि अन्यत्र रेफर गर्नुपरेको पाटन अस्पताल कोभिड १९ उपचार संयोजक डा। विमल पाण्डेले बताए। पाटन अस्पतालमा कोभिडका बिरामीको... The post भरिए काठमाडौं उपत्यकाका अस्पताल, लकडाउन गर्न सुझाव appeared first on Purbeli News.
Purbeli News 14 दिन पहिले
आइसियु र शयया भरिए, होला लकडाउन ?
काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य अस्पतालहरूमा कोरोनाका बिरामी उपचारका लागि व्यवस्था गरिएका आइसियु र शयया भरिएका छन्। शयया भरिएपछि अस्पतालहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वयमा अन्यत्र रेफर गर्नुपरेको जनाएका छन्। कोरोना बिरामीको उपचारका लागि व्यवस्था गरिएका शयया भरिभराउ भएपछि अन्यत्र रेफर गर्नुपरेको पाटन अस्पताल कोभिड १९ उपचार संयोजक डा. विमल पाण्डेले बताए। त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा पनि तीन/चार दिनदेखि कोभिड शयया भरिभराउ छन्। बिरामी भरिभराउ भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै समन्वय गरेर अन्यत्र पठाइरहेको अस्पतालक...
Lokaantar 14 दिन पहिले
कोभिड वार्ड खचाखच, लकडाउन गर्न चिकित्सकको सुझाव
काठमाडौं, बैशाख १० । काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य अस्पतालहरूमा कोरोनाका बिरामी उपचारका लागि व्यवस्था गरिएकाआइसियु र शयया भरिएका छन्। शयया भरिएपछि अस्पतालहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वयमा अन्यत्र रेफर गर्नुपरेको जनाएका छन्। कोरोना बिरामीको उपचारका लागि व्यवस्था गरिएका शयया भरिभराउ भएपछि अन्यत्र रेफर गर्नुपरेको पाटन अस्पताल कोभिड १९ उपचार संयोजक डा। विमल पाण्डेले बताए। पाटन अस्पतालमा […]
Reporters Nepal 14 दिन पहिले
ठूला सहरका विद्यालय एक महिना बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकासहित ठूला सहरका विद्यालयहरू कम्तिमा एक महिना बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले उपत्यकासहित १५ वटा जिल्लाका ठूला सहरमा रहेका विद्यालय एक महिना बन्द गर्नका लागि सिसिएमसीमा प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।‘काठमाडौं उपत्यकासहित पोखरा, विराटनगर, वीरगन्जसहित १५ वटा ठूला सहर छन्। यहाँ संक्रमण फैलन सक्ने भएकोले […]
कारोबार दैनिक 22 दिन पहिले
काठमाडौ उपत्यकाको दृश्य
मङगलबार देखिएको काठमाडौ उपत्यकाको दृश्य । देशभरि वायुु प्रदूूषण बढेकाले जनस्वास्थ्य विज्ञले अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन सुुझाव दिएका छन् तस्वीर रासस